Taariikh iyo xasuus qiimo badan iyo jidkii awooweyaasheen | Jubbaland.com
Taariikh iyo xasuus qiimo badan iyo jidkii awooweyaasheen
Ummadda Soomaaliyeed waxay isku dhaceen Dawladda Ingiriiska 1963, waxayna isku qabteen arrintii NFD. Dawladda Ingiriis oo aan cidi ka hor iman karin samaankaasi, waxayna Saamaalidu xiriirkii u jartay diblomaasiyadeed Ingiriiska. Dawladihii yaryaraa ee Afrika iyo Carab iyo adduunkii saddexaad baa yaabay waxayna Soomaali ku tilmaameen dad waashay.
General Mohamed Siyaad Barre wuxuu Reer Galbeed ka diiday oo Saudi Arabia iyo khaliijkana adeegsanaya inay Russia iyo Hantiwadaaggeeda xiriirka u jaraan. Maxamad Siyaad Barre wuu diiday wuxuuna iska joojiyey lacagihii Dawladaha Reer Galbeedku sida USA, Italy, Britain, Germany iyo qaar kale siin jireen Soomaaliya. Wuxuu reebay erayo murti ah sida Baarey guur oo suxuuntaadana la guur, gunnimo dhereg leh waxaan ka doorannay gobannimo gaajo leh “aqri YamYam” Soomaali baan ahay.
Jaamacadda Carabta iyo Masar xiriirka ka goosta iyo diidmadii qayaxnayd, oo aan Masar oo gabagabaysan ugu hiillinnay Saudi Arabia aan isku jiirray iyo Emarates ilaa ay wax naga jabiyeen.
Waxay Soomaalidu eriday Russia the Super Power, kaddib kolkay naga hiillisay dagaalkii 1977, waxaad ogaydeen heesihii “ka bul dheh”.
Libiya, Yeman iyo Itoobiya iyo ololihii casaa ee na loo adeegsaday Faydal Kaastaro iyo Aden.
Ha illoobin inay dagaallo af iyo addimba ahaa nagu socdeen ilaa 1963 NFD, 1964 itoobiya iyo xulufadeedii, 1977 oo ay ka qaybgaleen Russia iyo 14 dal oo shuuciyiin ahaa iyo Reer Galbeed oo la shaqaynayey.
Waxaa la yaab leh 25 kii sano, oo gacmaha xoog na lagu hayey inaan u shaqaysanaynay dhib kastaa ha jiree sidii dad madaxvannaan oo aan wali dawladahoodii taagta darraa ayan lugaha dhooqo loo gelin kolkii laga reebo dacwaddii badda. Waxaaba jirtay inay Soomaalida baddeeda iyo badaha adduunka la mari waayey!
Hadda oo aan arrinta carbeed dhexdhexaad ka nahay iima muuqato oo dambe oo na loo riixo iyo shilimmadii aan ka diidnay dawladaha waaweyn waqtiyo aan uga baahi badnayd, “Curaagtaba diid cad loo lulo, maxaa ku caddibay nin caga qaba”.
Curaagte wuxuu ahaa Reer Hargeysa gobannimada wax uga soo dagaallamay xoogaa buuna dhutin jiray. Wuxuu maqlay rag wax haysta oo lugo qaba ayaa isticmaarka lacag ka qaatay oo gobannimada diidan, isagana lacag ku baayacay wuxuuna tiriyey heeso badan oo waddani ahaa.
Madaxweyne Farmaajo iima muuqato wax ka leexiya jidkii dheeraa ee dhibta iyo gobannimada lahaa ee Ummaddani ku qaangaartay kuna gabawday, iyo wuxuu ugu lahdo lacag jeebka lagu wado.
Xigasho Abdullahi Warsame